Kathathu iTrafikhi yeBhlog yakho kunye nabaTyeleli abaFanelekileyo | Martech Zone
Kathathu iTrafikhi yeBhlog yakho kunye nabaTyeleli abaFanelekileyo
NgoLwesithathu, Juni 1, 2011 NgoMgqibelo, Oktobha 29, 2011 Douglas Karr
UBob Burchfield ubengumhlobo wexesha elide kwaye ungoyena mntu ulungileyo apha eIndianapolis. Uza kuyo yonke imicimbi yengingqi kwaye uneyona ibanzi Ikhalenda yemicimbi yaseIndianapolis kwingingqi kwi-AroundIndy.com. UBob ulahle eli nqaku kum namhlanje:
Ndifuna ukwabelana nawe malunga neprojekthi encinci yebhlogi eye yaqhubeka kwinyanga ephelileyo. Enye yee-CVB zedolophu (indibano kunye neeofisi zondwendwe) zibuze ukuba zingabhalela ibhlog yeendwendwe zam KwiBhlogIndy.com blog. Ndiyipapashe yonke imihla (kwaye kamva ngeveki) ukusukela ngo-2008, kodwa andikaze ndiyisebenzisele enye into ngaphandle koluhlu oluphezulu lwezinto ezili-10 zokwenza e-Indianapolis kwiveki ezayo. Ke xa ndifumana esi sicelo ndacinga, kutheni ungavuli kuzo zonke ii-CVBs kunye neendawo zommandla? Ke ndithumele isimemo malunga ne-100 labo nge-imeyile. Amanqaku aqala ukuza ngobusuku. Ndiqale ukupapasha yonke imihla, yonke intsasa nge-6 kusasa, nge-16 kaMeyi.
Kulungile ……… ..
Kwiveki kaMeyi 16-22, Ukugcwala kwebhlog bekuphakame ngama-77.5% ukusukela kwiveki ephelileyo. Kwiveki kaMeyi 23-29, ukugcwala kwaba TRIPLE kwiveki ephelileyo. Ukuhamba kwezithuthi ngoMeyi 2011 ibiyi-128.6% ngaphezulu ngaphandle kukaMeyi 2010. Ibhlog yeendwendwe kaMeyi 30 yamisela a Ingxelo yosuku olunye yosuku, iipesenti ezingama-79.1 ukusuka kusuku olunye lwangaphambili.
Eyona nto inomdla kum kukuba ukuba ndikhetha amagama aphambili kwibhlog nganye kwaye ndenze uphando kuGoogle, iyavela kwiphepha lokuqala leziphumo zophendlo lukaGoogle kwiyure enye yokuthunyelwa.
Ukukhuthazwa kwale nzame kwavela kufundo Ukubhengezwa kweNkampani yeDummies. Ke ndibhala nje ndisithi “enkosi” ngalo lonke uncedo, ingcebiso, inkxaso kunye nolwazi olulungileyo owabelene nam (kunye nabafundi bam) oko saqala ukudibana eSouthside Smoosiers (Ndisayikhumbula loo ndibano INdebe yeembotyi).
UBob Burchfield, uMhleli
Enkosi kuBob ngokuthatha ixesha lokundibhalela. Kungenxa yoko le nto sayibhalayo incwadi! Sifuna abantu bakhulise igunya labo kunye nokubaluleka kwi-intanethi ngeendlela ezinokusebenziseka, ezinokulinganiswa. Ezi ntlobo ze-imeyile zezona zibeka uncumo ebusweni bam kwaye zindomeleze!
Iprojekthi yeDomino: Zithembele kuMngeni wokuBhala
Ubulungisa beMithombo yeendaba kuLuntu kunye nokuBuya kuTyalo mali
Juni 1, 2011 ngo-10: 18 PM
Ndifuna ukufunda incwadi yakho! Ndimtsha kubloga kwaye ndifuna lonke uncedo endinokulufumana!
Juni 1, 2011 ngo-10: 22 PM
Qiniseka ukuba ubhalisela iincwadana zethu. Sabelana ngeengcebiso veki nganye!
Juni 1, 2011 ngo-10: 23 PM
Ndifuna ukufunda incwadi yakho! Ndimtsha kubloga.
Juni 1, 2011 ngo-11: 14 PM
Ndicinga ukuba ndifuna ukuyifunda kwakhona.
Juni 2, 2011 ngo-12: 38 AM